Raysul Wasaare Khayre oo Booqday Xeebta Liido – Puntland Voice
Raysul Wasaare Khayre oo Booqday Xeebta Liido
March 13, 2018 6:41 pm Views: 14
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali khayre ayaa kormeer shaqo ku tagay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalmiga ah ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Maaliyadda, waxuuna kulamo kale duwan la yeeshay madaxda labada Wasaaradood.
Ugu horeyn Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay waheliyaan wasiir Ku xigeenka iyo Wasiir dowlaha Wasaaradda ayaa Ra’iisul Wasaaraha ku soo dhaweeyay xarunta wasaaaradda, waxayna usoo bandhigeyn sida ay shaqada u wadaan iyo halka ay howshu u marayso, isgoona Wasiir Cawad warbixin kooban ka siiyay dhammaan safaradii uu ku tagay dalka dibadiisa iyo guulaha laga gaaray.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa kulanka kadib tilmaamay in loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii loo xoojin lahaa xirirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya la wadaagto dalalka caalamka buu yiri, si ay usoo ceshato sharaftii iyo awoodii ay ku lahayd caalamka.
Ugu dambayntii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqday xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis, oo ah goob loo tago nasasho iyo dalxiis, isagoona wakhti kula qaatay shacabkii usoo nasasho tagay xeebta kuwaas oo u badnaa dhalinyaro. Sidoo kalena waxuu ka dhegaystay talooyinkooda, waxuuna u balan qaaday inu hirgilin doona aragtidooda kuwa ugu muhiimsan.